Imithetho yentela yezwe inqobo ukudayiswa amafulethi, ukuthola imiklomelo, izinto inkontileka ka umnikelo, ophuma ukuqasha impahla noma ukuqhutshwa ezingakenziwa kusukela intela by intela ejenti, umuntu isidingo uhambise umbiko yokuqala mayelana iholo okuthiwa i-3-PIT. Lo mthetho livikeleke izibopho le yabakhokhintela zokuhlola ezasungulwa inombolo sigaba 23 Tax Code of the Russian Federation (lento №1, endinyaneni 4).
Nje sithi ukumenyezelwa ukudayiswa efulethini kufanele ahanjiswe nsuku saziso, uma ephethwe ingcebo esingaphansi iminyaka engu-3. Lesi isilinganiso wayeshukunyiswa intela ethile lokwenza imali evela kokwenziwe zokucabangela emakethe ingcebo, njengoba ngokuvamile abantu bathenga indlu ukuze uhlale kulo isikhathi eside. Imibhalo ifakwa iziphathimandla zentela endaweni sokubhalisa ngaphambi kuka-April 30 konyaka kulandela eyodwa uma kwadingeka ukuthenga yokuthengisa, ezifana ezindlini.
Uma simemezelo ukudayiswa amafulethi ngeke zithunyelwe ngaphambi kwalolo suku, umdayisi naka necala ngenxa yezizathu intela, futhi kuncike inhlawulo ruble 1000. Khumbula ukuthi intela ngokuvamile engakutholanga ukusebenza kwe-ingcebo elisetendeni impahla yakho kuphele iminyaka engaphezu kwemithathu. Kulokhu, akukho izitatimende emagunyeni intela ungadikibali.
Entela lapho ukuthengisa ifulethi siyingxenye ye ifomu "Tax on engenayo sabantu zemvelo." Yena ligcwaliswe ishidi "E" nge izincomo ezibekwe isahluko nesikhombisa Isijobelelo №2 ukuze Order of Federal Tax Service № MMB-7-3 / 760 @ (yokutholwa ngo-2011, November 10), noma entsha izinguqulo kwale dokhumenti. Ungakwazi basebenzisa izinhlelo ezikhethekile yokubika enikeza khulula intela ukuhlolwa.
Lapha udinga ukucacisa igama zokuqala enhlokweni nalutho. Ngokulandelayo, ezindimeni 1.1.1 ukuze 1.4.1 zibonakala lemali semali udinga ukuqinisekisa ukunamathela amakhophi yokuthengisa izinkontileka. Emazweni ase №№ 1.1.2 - 1.3.2 iphawula ovumelekile inani lawo wonke izinto lwenteke we imali yentela, okuyinto ayikwazi ukudlula okwamanje ruble esigidini. Thina iphawule yakho yokuthi ukuqaliswa kwe-efulethini esingaphansi kwesigidi, uma ephethwe okungenani iminyaka emithathu kumemezela namanje udonseleka.
ISimemezelo ukudayiswa amafulethi injalo ingasetshenziswa ukuze awunikeze ulwazi mayelana ukudayiswa kwempahla ngaphandle zokuhlala, izindlu nokunye. Ukuze wenze lokhu, eshidini efanayo "E" kuyinto 2.1 amaphuzu. . Futhi-2.2, aqukethe ulwazi engenayo abayithole ngokuthengisa insimu (isibonelo, yokuthengisa imishini), kanye nenani lentela ezibanjwayo (isigaba 2.1.2 -. Ruble 250 000, esigabeni 2.2.2 -. Esikhathini Inani engenayo ibhalwe ).
Ngisho noma ungazange ukuthengisa, futhi ukuthenga ingcebo, kunengqondo ukugcina ngokucophelela yonke imibhalo okuhlobene lomsebenzi: kusukela inkontileka ukuthenga ziphethe izitatimende zasebhange, amarisidi, eyakhiwa Izenzo sokwamukela. Zingaba usizo esikhathini esizayo, lapho efulethini uthengiswa kunesidingo kule dokhumenti njengoba isimemezelo ukudayiswa efulethini.
Zokuhlala ingcebo esifundeni eMoscow
Amafomu yobunikazi kanye ngezigaba zabo
Ithengwa kanjani i-ifulethi eSifundeni sesitimela - Izinto ukucacisa intengo Abadayisi bezindlu
Okunethezeka Abadayisi bezindlu Petersburg amafulethi ezitimeleni "Petrogradskaya"
Kungcono ukuthenga izindlu wesibili noma isakhiwo esisha?
"Gili GC6" (Geely GC6) - Ukubuyekeza, Ukucaciswa
Oleg Gazmanov: nemindeni
Oxfords kwesitayela amadoda - izicathulo ngaso sonke isikhathi
Izinzuzo, umonakalo, ikhalori - izaqheqhe raisin
Indawo eNhlonhlweni YaseChukchi, isimo sezulu kanye ezikhangayo
Ukudla Amaphrotheni adingwa yimisipha: imikhiqizo main
7 izindlela kodwa baya kohlala Melika
Svanidze Nikolay Karlovich: Biography, ubuzwe
Goldenrod abavamile. Izici nobuntu izitshalo
Ufuna ukwazi ukuthi unakekele kanjani intshebe yakho?
Kungani ku leucocytes igazi kwehlisa?